China FOTON U12 mveliso kunye nabenzi | Ifoto
I-FOTON U12 yegolide powertrain ibalaselisa ukusebenza kwamandla kunye nokusetyenziswa okuncinci, ukuhlangabezana neemfuno zakho zenkonzo ethile kunye nenkonzo eqhelekileyo kwimigama emide.
Inqanaba elipheleleyo 1200 * 2550 * 3790
Isondo lamavili 6000
Ukunciphisa Ubunzima 14.5T
Indawo yokuhlala I-32 + 1 + 1/47 + 1 + 1 (indlu yangasese) / 49 + 1
Ulwakhiwo loMzimba Imon-monocoque
Imigangatho yokukhutshwa I-EURO II-i-EURO V
Igumbi laseLuagge 10 m3
I-FOTON U12 Umqeqeshi wefestile enye eneempawu ezihlengahlengisiweyo kunye nokukhanya okulungiselelwe, ukwakha imeko-bume eyonwabisayo nenomdla kubakhweli.
I-powertrain yegolide idibanisa kunye ne-Cummins ISG injini, ukuhanjiswa kwe-ZF, i-SACHS clutch kunye ne-WABCO ABS kunye ne-ESC (ngokuzithandela), ibalaselisa ukusebenza okugqwesileyo kunye nokukhupha okuphantsi.
Ukukhokela uyilo olulula kunye neemodyuli;
Itekhnoloji yejet yoxinzelelo oluphezulu lwe-2000bar;
Inkqubo entsha yobuvulindlela kunye nezixhobo.
Ubunzima bokukhanya, izindlu zealuminium;
Ukukhutshwa kwengxolo ephantsi ngokusebenzisa ii-helical helical;
Ii-synchronizers zesondlo ngaphandle kwexesha lokuhambisa;
Ukugcwaliswa kweoyile ngalo lonke ixesha kuyafumaneka.
Inceda ekwandiseni ubomi betayara ukuya kuthi ga kwi-10%;
Ukuphucula ukusebenza kwetreyila ngexesha lokuhamba ngokungxamisekileyo;
Inceda ukuthintela ukutyibilika kwetreyila kunye ne-jackknifing ngexesha lokuqhekeza;
Kwandisa ukusebenza kweebhuleki kuzo zonke
Umlingani ophezulu oqhubekayo wokungqubana;
Ukumelana ubushushu High (ebunayo);
Izinga lokunxiba eliphantsi kunye nozinzo kwisantya esiphezulu;
Akukho mkhwa deformation;
Indalo iyahambelana kwimveliso kwaye
Igumbi lenjini lixhotyiswe ngealam yeqondo lobushushu esweni-yexesha-lokwenyani kunye nesixhobo sokucima umlilo ekufezekiseni ukubekwa kweliso kwexesha-lokwenyani; Izinto ezinganyangekiyo ezilangatye kunye ne-A-grade izinto ezinganyangekiyo ezinelangatye ezinentsebenzo yokhuseleko olungcono zisetyenziselwa ukujikeleza umthombo wokufudumeza.
UFoton ungumnini wenqanaba lesizwe imigca yenqanaba ledigitalization, isantya sovavanyo lwebhedi, ibhedi yokuvavanywa kwebhedi esecaleni, umthwalo we-asi, ibhedi yovavanyo lwe-ABS, inkqubo yokufumanisa uvavanyo lokuqhekeza kunye nabanye, Ukuqinisekisa isatifikethi kunye nokuvunywa kwiLebhu yaseJamani iRheinland kunye nelebhu yesizwe ye-CNAS
Iimveliso zeFoton zihamba ngokujonga ngokungqongqo isithuthi kunye novavanyo lokudlula ngaphezulu kwe-100 lamawaka eekhilomitha kwimeko yeendlela ezahlukeneyo kwaye phantsi kweemeko zemozulu eziqatha njengobushushu obuphezulu, ubushushu obuphantsi kunye noxinzelelo oluphantsi.
IFoton iXhotyiswe ngeebhentshi zovavanyo lobuchwephesha kunye neendlela ezahlukeneyo zovavanyo ukuqinisekisa ukuthembeka kunye nokusebenza kwezixhobo kunye neenkqubo ezilungiselelwe ibhasi yeFoton. Ngobume obungqongqo nobomeleleyo, ibhasi yeFoton imelana necala kwicala elingqameneyo kunye nentloko kunye nokuthintela ukuntywila mva. Ngaphambi kokungena kwinkonzo, bafumana uvavanyo olunzima kunye nokuqinisekiswa.